Ny fahatapahan'ny fifanekena momba ny asa. - FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
Ny fahatapahan’ny fifanekena momba ny asa.
Ireto avy ny antony mahatapaka ny fifanarahana momba ny asa :
Ny fahafatesan’ny mpiasa,
Fandroahana avy amin’ny mpampiasa,
Fametraham-pialana avy amin’ny mpiasa,
Fifanarahana eo amin’ny andaniny sy ny ankilany,
Tranga tsy azo anoharana (cas de force majeure) izay apetraka amin’ny fitsarana mahefa ny fandinihana azy
NY AMIN’NY FIFANEKENA VOAFE-POTOANA.
Tsy azo tapahina alohan’ny fiafaram-potoana nifanarahana nohon’ny sitrapon’ny andaniny na ny ankilany ny fifanekena voafe-potoana.
Ireo tranga ahazoana manapaka ny fifanekena voafe-potoana :
Raha toa ka voafaritry ny fifanekena,
Noho ny hadisoana bevava voafaritry ny fitsipika anaty, na raha toa ka tsy misy fitsipika anaty dia apetraka amin’ny fandinihan’ny fitsarana mahefa.
NY AMIN’NY FIFANEKENA TSY VOAFE-POTOANA.
Azo tapahina amin’ny sitrapon’ny iray amin’ny roa tonta izay nifanaraka ny fifanekena tsy voafe-potoana,
Ny andaniny na ny ankilany mandray ny fanapahan-kevitra hanapaka ny fifanekena tsy voafe-potoana dia tsy maintsy maneho ny fampiomanana mialoha.
Azo tapahina ny fifanekena raha toa ka misy hadisoana bevava voasoratra ao amin’ny fitsipika anaty, na raha tsy misy izany, apetraka amin’ny fandinihana ataon’ny fitsarana : ary tsy misy fampandrenesana mialoha.
Ny andaniny na ny ankilany nanapaka ny fifanekena, ankoatry ny hadisoana bevava, ka tsy nanao fampiomanana mialoha na nahatanteraka manontolo ny fe-potoana ny fampiomanana mialoha, dia tompon’andraikitra amin’ny fandoavana tambiny mitovy habe amin’ny karama sy ny fanampin-karama samihafa izay tokony ho naloa tamin’ny mpiasa mandritra ny fe-potoana.
Andraikitra tsy maintsy ataon’ny mpampiasa mandritra ny fampiomanana mialoha :
Fanomezana fanamarinana vonjimaika ny fampiasana ny mpiasa, amin’ny vanin’andro ampandrenesana ny fahatapahan’ny fifanekena : miteraka fandoavana onitra ny tsy fanatanterahana izany.
Tsy ara-dalàna ny fandroahana amin’ireto tranga manaraka ireto :
Tsy mifanaraka amin’ny paika voasoritra ao amin’ny fehezan-dalàna na ny fifanarahana iombonana sy ny fitsipika anatiny;
Tsy misy antony mitombina mifandraika amin’ny asa na noho ny antony tsy marina;
Noho ny antony miankina amin’ny hevitry ny mpiasa na ny noho ny maha mpikambana azy amina sendika.
Ny mpitsara no mandinika ny maha ara-dalàna na tsia ny fandroahana.
Vokatry ny fanapahana tsy ara-dalàna ny fifanekena momba ny asa :
Mitarika ny fandoavana onitra, ary apetraka amin’ny fitsarana mahefa ny fandinihina azy.
Ny andaniny nanapaka no manaporofo ny maha-ara-dalàna ny fanapahana.
Ny tsy maintsy ataon’ ireo izay mandray ny fanapahan-kevitra hanapaka ny fifanekena momban ny asa :
Fampandrenesana ny ankilany an-taratasy ny fanapahan-kevitra;
Filazana ny antony nahatonga ny fanapahana ary fampitana ny taratasy amin’ny fomba rehetra ahafahana manamarina ny naharaisana azy.
Ireo fepetra ny momban’ny fanapahana ny fifanekena momba ny asa :
Ny vanin’andro naharaisana ny taratasy fandroahana na fametraham-pialana no mametra ny fiatombohan’ny fampiomanana mialoha.
Tsy azo raisina intsony, ny filazana antony vaovao aorian’ny vanin’andro nampandrenesana.
Ny tokony hataon’ny mpampiasa raha mihevitra ny handroaka mpiasa :
Tsy maintsy manaja ny zon’ny mpiasa hiaro tena, raha tsy misy ny filankevitra momba ny fitsipipifehezana ao amin’ny orinasa.
Tsy maintsy manao fampahafantarana an-tsoratra mialoha ny anton’ny fandroahana izy.
Fampitana amin’ny mpiasa ny antontan-taratasy mirakitra ny fiampangana azy, raha mangataka izany izy, amin’ny alalan’ny famoahany ny fiarovantenany sy ny fanampian’ny olona iray izay nofidiny.
Ireto avy ny zon’ny mpiasa nahazo fampandrenesana an-taratasy voakasiky ny fandroahana :
Tsy maintsy omen’ny mpampiasa avy hatrany amin’ny vanin’andro ahatapan’ny fifanekena :
Ny ambin-karama amin’ny vanin’andro andehanan’ny mpiasa;
Ny tamby fanonerana ny fialan-tsasatra tsy noraisina talohan’ny fahatapahan’ny fifanekena;
Ny fampiomanana mialoha kajiana araka ny lalàna manankery, raha tsy ohatra ka misy hadisoana bevava;
Ny taratasy fanamarinana ny niasàna.
Ny tokony hataon’ny mpiasa raha mametra-pialana izy :
Malalaka ny fametrahana fialana;
Tsy maintsy manome ny anton’ny fanapahan-keviny;
Tsy maintsy manao mialoha ny famindran-draharaha raha ilain’ny mpampiasa izany.
Ny fahatapahan’ny fifanekena momba ny asa noho ny sotasota ara-nofo na ara-tsaina :
Ny fahatapahan’ny fifanekena noho ireo antony ireo dia mitarika fahazoan’ny olona tra-pahavoazana onitra, izay feran’ny fitsarana mahefa, raha toa ka voaporofo amin’ny fomba rehetra ny nisian’ilay fihetsika avy amin’ny andaniny nanao ny fahadisoana.
Ireto avy ny famaritana ny fandroahana ara-toekarena :
Ny fandroahana vokatry ny fahasahiranana ara-toekarena,
Ny fandroahana nohon’ny fiovan’ny teknolojia,
Ny fandroahana dia mety ho isam-batan’olona na itambarambe.
Ireto avy ny paika tsy maintsy arahin’ny mpampiasa raha mihevitra ny handroaka mpiasa noho ny antony ara-toekarena izy:
Fangalana mialoha ny hevitry ny komitin’orin’asa, na ny solontenan’ny mpiasa ny fepetra ho raisiny.
Fampitana amin’izy ireo ny momba :
Ny antony fandroahana;
Ny toe-bolan’ny orinasa;
Ny drafi-panarenana nokasaina;
Ny listry ny mpiasa voakasika isaky ny sokajy amin’ny asa;
Ny laharam-pahamehana amin’ny fandraisana hiasa indray;
Ny fivoaran’ny fampiasana ao anatin’ny orinasa;
Fitanana an-tsoratra izay rehetra voalaza nandritra ny fivoriana ary atao peta-drindrina ho fantatry ny mpiasa rehetra.
Manome ny valiny sy ny heviny momba ny fepetra horaisina amin’ny mpampiasa ny komitin’orinasa na ny solotenan’ny mpiasa, ao anatin’ny roapolo andro (20) aorian’ny fivoriana.
Mampandre ny mpiadidy ny asa (inspection du travail) ny mpampiasa, ka ampiarahina amin’ny fangatahana :
– Ny fitanana an-tsoratra izay mirakitra ny hevitry ny komitin’ny orinasa na ny solontenan’ny mpiasa,
– Ny listry ny mpiasa voakasiky ny fampihenana sy ny taratasy rehetra mety hilaina momba izany.
Manome ny heviny ao anatin’ny dimy ambiny folo andro (15) aorian’ny fangatahana ny mpiadidy ny asa.
Mampandre ny Mpiadidy ny asa ny mpampiasa ny amin’ny fepetra heveriny hampiharina, raha toa ka tsy misy komitin’orinasa na solontenan’ny mpiasa. Manome ny heviny ao anatin’ny (15) dimy ambin’ny folo andro aorian’ny fitsirihana ny mpiadidy ny asa. Raha dila io fe-potoana io ka tsy mamaly ny mpiadidy ny asa dia midika avy hatrany ho fanekena ny fepetra horaisin’ny mpampiasa ny fahanginany.
Ireto avy ireo fepetra tsy maintsy ataon’ny mpampiasa :
Maka ny hevitry ny solontenan’ny mpiasa amin’ny fanaovana ny lisitry ny mpiasa voakasiky ny fampihenana.
Manaraka ny filaharana, voafaritrin’ny lalàna na ny fifanarahana iombonana ny fanaovana ny lisitra, araka izao manaraka izao :
Fahelàna ao amin’ny orinasa;
Fahaiza-miasa, fahaizana ara-teknika ary fahatsiarovan-tena amin’ny asa;
Raha tsy mifanaraka ny roa tonta ny amin’ny lisitra, dia ny mpiadidy ny asa no manapaka ao anatin’ny (15) dimy ambin’ny folo andro aorian’ny fametraham-pitarainana, araka ireo filaharana ireo.
Ny tsy famalian’ny mpiadidy ny asa ao anatin’io fe-potoana io dia midika avy hatrany ho fanekena ny lisitra.
Ny momban’ny fanovana mavesa-danja ny fifanekena isam-batan’olona:
Ny fahasahiranana ara-toe-karena sy ny fiovan’ny teknolojia dia mety hiteraka ny fandroahana na fanovan-toerana ny mpiasa.
Tsy maintsy manaraka ny paikan’ny fandroahana noho ny antony ara-toekarena voalaza etsy ambony ny mpampiasa amin’izany.
Ireto avy ny paika tsy maintsy arahina raha misy fanovàna tiana atao :
Fampandrenesan’ny mpampiasa an-taratasy ny mpiasa voakasika,
Fanomezan’ny mpiasa ny heviny ao anatin’ny (15) dimy ambin’ny folo andro manomboka amin’ny fotoana andraisana ny taratasy fampandrenesana.
Ny tsy famalian’ny mpiasa, raha dila io fe-potoana io, dia midika avy hatrany ho fanekena ny fanovàna ny fifanekena. Torak’izany koa raha manome ny fanekeny ara-potoana ny amin’ny fanovàna ny mpiasa.
Tompon’andraikitra amin’ny fahatapahan’ny fifanekena ny mpampiasa raha tsy manaiky ny fanovàna novivavinainy ny mpiasa. Mahazo ny zo rehetra ananan’ny mpiasa voaroaka noho ny antony ara-toekarena ny mpiasa.
Tsy maintsy antony ara-toekarena, ary mavesa-danja no anaovana ny fanovana.
Ireto avy ny zon’ny mpiasa voaroaka:
Ankoatra ny zo mifandraika amin’ny fandroahana ny mpiasa rehetra, ny mpiasa voaraoka noho ny antony ara-toekarena, dia mahazo :
Tambim-pandroahana kajiana ho karama (10) folo andro isaky ny taona feno (1) iray niasana, nefa tsy mahazo mihoatra ny karama (06) enimbolana ny totaliben’ireo.
Fikajiana io tambiny io :
Kajiana avy amin’ny karama farany miaraka amin’ny tombontsoa sy ny fanampin-karama rehetra azon’ny mpiasa tamin’ny fandroahana. Tsy hafangaro amin’ny tambin’ny fampiomanana mialoha, ny tambim-pialan-tsasatra ary koa ny onitra noho ny fandroahana tsy ara-drariny.
Ny tokony hataon’ny mpampiasa amin’ny fotoana anapahany ny fifanekena momba ny asa :
Tsy maintsy manome ny mpiasa taratasy fanamarinana ny niasàny, izay tsy ahitana afa-tsy :
Ny vanin’andro nidirana niasa,
Ny vanin’andro nitsaharana,
Ny karazan’asa na ny asa nifanesy natao,
Ny vanim-potoana niandraiketana ireny,
Ny sokajy amin’ny asa mifanandrify amin’izany.
Ny tsy fanarahana io fepetra io dia mitarika fandoavana onitra.
Tsy maintsy manome ny fanamarinana vonjy maika ny mpampiasa mandritra ny fotoana fampiomanana mialoha.
Ny tsy fanarahana io fepetra io dia mety handoavana onitra.